ခြေဖ၀ါးနဲ့ပေးတဲ့ မဲ၊ လက်ဖျားနဲ့ပေးမယ့် မဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ခြေဖ၀ါးနဲ့ပေးတဲ့ မဲ၊ လက်ဖျားနဲ့ပေးမယ့် မဲ
ခြေဖ၀ါးနဲ့ပေးတဲ့ မဲ၊ လက်ဖျားနဲ့ပေးမယ့် မဲ
Posted by အာဂ on Mar 20, 2012 in 2010/2012/2015 Election, Know-How, DIY |5comments
ကျုပ်ငယ်ငယ်က အဘိုးအဘွားတွေနဲ့ နေခဲ့ရတယ်။ အဘွားရဲ့အဖေ၊ ဘိုးကြီး အဘိုးရဲ့အမေ ဘွားကြီးတို့နဲ့ တောင်နေခဲ့ဖူးသဗျ။
အဲဒီ အဘိုး- အဘွား ဘိုးကြီး ဘွားကြီးတွေက ရှေးလူကြီးတွေမဟုတ်လား၊ ရှေးရိုးဆန်တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ သူတို့နားဝင်ဆိုးတဲ့ စကားမျိုး ကြားလိုက်ရရင် သူတို့လက်သုံးစကားနဲ့ပဲ တွင်တွင်ကြီးတုံ့ပြန်တော့တာပေါ့။ သူတို့ လက်သုံးစကားက ´ကြားရ- ကြားရ နားဝမချမ်းသာလိုက်လေကွယ်´တဲ့။
အခု ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း ရှစ်ဆယ်ကျော် အဘိုးကြီးဖြစ်လာတော့ နားခါးတဲ့စကားသံတွေ၊ ပြောသံ-ဆိုသံတွေ ကြားလာရရင် အဘိုးကြီးနည်းနဲ့ တုံ့ပြန်မိလာတယ်ဗျာ၊ ကြားရ- ကြားရ နားဝမချမ်းသာလိုက်တာလေသကွယ်။
ကျုပ်နားခါးနေတဲ့ စကားက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေအကြောင်းဗျ။ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးလည်း အဲဒါတွေကြားနေကြရမှာ ပေါ့ ။ကြားတိုင်းလည်း နားခါးနေကြမှာပေါ့ ။ ပြည်သူတွေအားလုံးလည်း နားခါးနေကြမှာပေါ့ ။ ဒီချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံးလည်း နားခါးကြမှာ ပေါ့။ မျက်စိကျယ် နားကြီးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေ၊ ကမ္ဘာ့လူထုတွေကလည်း နားခါးကြမှာ မုချပေါ့။
သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကြိုသတင်းတွေက ဆိုးလှသဗျာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုဧရာမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ ခရီးစဉ်တွေကြည့် ။ ဖြောင့်ဖြူးတယ်ရယ်လို့ မရှိဘူး။ ဟန့်တာ- တားတာ လှည့်တာ- ပတ်တာ- ညစ်တာ- ထစ်တာ၊ လှီးတာ-လွဲတာ အို….နည်းမျိုးကို စုံတကာ စေ့ရော။ ကလော်ကလန့် လုပ်လိုက်ကြတာ အားလုံးအကြားပဲ။ အားလုံးအသိပဲ။
ကလေးစကားနဲ့ ပြောရရင်ခြေကလိမ်ထိုးတာ လက်ကုန်ပါပဲ ဗျာပေါ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီိလိုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ရော၊ ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုရော၊ ဒီထက် ဒီထက်ပိုကြီး- ပိုကျယ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုရော ယုံတယ်၊ အားထားတယ်။ ဒီမိုကရေစီကိုယုံရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ယုံရမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီတော့ လာချင်တာလာစမ်း၊ ရွေးပွဲဆိုရင် ၀င်မှာပဲ။ စိတ်ထားမျိုးရှိတယ်။
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးအတွက် ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွေတော့ ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ ။ ဒါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ စံနှုန်းဗျ ။
ခက်တာက ဒီလို။ ဒီကြားဖြတ်ဆိုိတာလေးက ဒီမိုကရေစီအကျိုးအတွက်လုပ်တာပါတဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရထိပ်သီးတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်ထိပ်ဖူးတွေက ဟိုလိုပြော ဒီလိုပြောပေါ့လေ။ အောက်ခြေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာက တစ်မျိုးကြီးဗျ။
အောက်လူတွေက ချိုးကြ၊ ဖောက်ကြ၊ လိမ်ကြ၊ ကွေးကြ၊ ဖဲ့ကြ၊ ရွဲကြ လုပ်နေကြတာ။ ဒီိတော့ ´ဒီမိုကရေစီအကျိုး´ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ ပုံဆိုးပန်းဆိုးဖြစ်စပြုလာနေတာပေါ့။ ဒီလိုပြောတောပါ့မလား မသိဘူး။ မတော်ကာမှ နေရော။ ကျိုးတာ- ပဲ့တာကိုတော့ မပြောဝံ့ဝံ့။ ပြောဝံ့ဝံ့ ပြောရတော့မှာပဲ ထင်ရဲ့ဗျာ။
´ဒီိမိုကရေစီိ ခြေတစ်ပေါင်ကျိုး´ ရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို အဟန့်အတားတွေလုပ်နေတာက ပြနေတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်တွေခဗျာ ကြံ့ဖံွ့တွေ၊ ကြံ့ဖွံ့လက်ဝေခံတွေ၊ ကြံ့ဖွံ့သစ္စာခံဝန်ထမ်းတွေ၊ကြံ့ဖွံ့တစ်ပူရိုင်း၊ ရပ်လူကြီး-ရွာလူကြီးတွေရဲ့ ခြိမ်းလား ခြောက်လားတွေ လုပ်နေတာက ပြနေတယ်။
အမျိုမျိုးပဲ ကြုံလေဘုံတွေ ဖြစ်နေတော့တာဗျ။
ရှိသေးတယ်။ မဲစာရင်းမှာ ပါသင့်သူတွေမပါ။ မပါသင့်သူတွေပါ။ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာက တမျိုး. အိုး.. သဗ္ဗနာမ်ပေါင်းကို စုံတကာ့ စေ့နေတာပေါ့ဗျာ။
အဲ ကြိုတင်မဲလိုလို ဘာလိုလို လုပ်နေတာကလည်း ရှိသေးတယ်။ ဘာကောင်မွေးပြီး ဘာမွေးပေါက်လာမယ်တော့ မသိဘူးပေါ့လေ။ လူဦးရေစာရင်းကောက်တယ်၊ ၀န်ထမ်းစာရင်းကောက်တယ်ဆိုတာတွေကလည်း ရှိသေး။
ထားပါတော့ ။ ကျုပ်အထင်ကတော့ ကြားဖြတ်ကြီးက အိုနာကျိုးကန်းစခန်းဆိုက်တော့မယောင်ယောင် ဖြစ်နေပြီိတောင်မသိပါဘူးဗျာ။ ပြည်သူလူထုတွေက စိတ်တထင့်ထင့်၊ ရင်တမမနဲ့ ရွေကောက်ပွဲဇောချွေးပြန်နေကြတာ အမှန်ဗျ။
ကျုပ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာ ဒီကြားဖြတ်ကလေးကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့အညီ လူစဉ်မီ၊ သူစဉ်မီ၊ ဒီမိုကရေစီစဉ်မီ၊ ဒေါင်ဒေါင်မြည် သိက္ခာရှိရှိ၊ ကျင့်ဝတ်ပြည့်ပြည့် သမာဓိရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလောက် ဒေါင်ဒေါင်မမြည်တောင် ၂၀၁၀ ရွေးပွဲရဲ့ နှောင်းမွေး အမြွှာကလေးဆိုတာမျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်တာ အမှန်ပေါ့။
ဒီမိုကရေစီအကျိုးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ၀ိုင်းပြင်ကြပါဦး။ ဒီမိုကရေစီ ခြေတစ်ပေါင်ကျိုး ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ် လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း တစ်ဆိတ်လောက်တော့ ကြည့်ပြော၊ ကြည့်ပြင်၊ ကြည့်ပြောင်းကြပါဦးဗျာလို့ပဲ ပြောချင်လှပါသဗျာ။
ခြေတစ်ပေါင်ကျိုး ရွေးကောက်ပွဲဆိုလို့ ကျုပ်တို့ထောင်ထဲတုန်းက သုံးခဲ့ကြတဲ့စကားလုံးကို သတိရမိတယ်ဗျာ။
ထောင်ထဲမှာ ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးအကျဉ်းသားတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အများက အလုပ်စခန်းတွေမှာ ကျောက်ပိလို့၊ ကျောက်တောင်ပေါ်က လိမ့်ကျလို့ခြေကျိုး၊ ပေါင်ကျိုးဖြစ်ခဲ့ကြရသူတွေပေါ့။ သူတို့ကို ကျုပ်တို့က ထောက်လှမ်းရေးတွေလို့ ခေါ်တယ်။ ခြေကျိုးပေါင်ပြတ်တွေဆိုတော့ သူတို့ခမျာ ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ ထောက်လှမ်းကြရရှာတာပေါ့ ။ ဒါကို ကျုပ်တို့က မစာမနာ မညှာမတာ နာမည်ပြောင်းပေးခဲ့တာ။
အခုရွေးကောက်ပွဲဟာ ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုပါတော့ ။ ကျုပ်အကျင့်ပါပါ ဘယ်လိုများနာမည်ပြောင်ပေးမိမလဲ။ ကျုပ်ကိုကျုပ် မေးခွန်းပြန်ထုတ်နေမိသဗျာ။
နာမည်ပြောင်တွေကိစ္စထားလိုက်ပါတော့ ။ ကျုပ်စိတ်ထဲ တကွိကွိနဲ့ ယားကျိယားကျိ ပေါ်လာတဲ့ ပေါက်ကရစိတ်ကူးလေးတော့ ပြောချင်သေးတယ်။
ဒီနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်နိုင်ငံရေး စည်းရုံးရေးခရီးတွေ လှည့်နေတယ်။ ရွာ ရိုးကိုပေါက်ခရီးလို့ခေါ်ရမလား။ ပြည်ရိုးကိုးဆယ်ပေါက်ခရီးလို့ ခေါ်ရမလားမသိနိုင်အောင်ပါပဲ။ ကိုးဆယ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ပဲ့တင်သံက ကြားရတုန်းဆိုတော့ ပြည်ရိုးကိုးဆယ်ပေါက်လို့ ပြောမိတာပေါ့ ။တစ်ပြည်လုံက အုန်းအုန်းထ၊၀ုန်းဝုန်းကြွနေတာ ဟို.. စကြာဝဠာကတောင် လှမ်းမြင်၊လှမ်းကြား၊ လှမ်းသိနေလောက်ပြီဗျို့၊ ဟုတ်ရဲ့လား။
ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ရင် မဆီမဆိုင်လား၊ ဆီဆီဆိုင်ဆိုင်လားမသိ၊ ကာတွန်းပုံတစ်ပုံကို သတိရမိတယ်။ စစ်ကြိုခေတ်က ကမ္ဘာကျော် ဗြိတိသျှကာတွန်းကျော် ဒေးဗစ်လိုးရဲ့လက်ရာဗျ။
အဲဒီအချိန်က နာဇီ ဂျာမနီတွေက ဗြိတိသျှကျွန်းကလေးကို ဗုံးကောဇောခင်းနေတယ်လေ။ အင်္ဂလိပ်တွေလည်း ပြေးစရာမြေမရှိဖြေစ်နေတော့တာပေါ့ ။ ကာတွန်းဆရာက လန်ဒန်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာကြီးမှာ ကာတွန်းရေးတယ်။ ကာတွန်းထဲမှာ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်ချာချီကြီးက ရင်ကော့ကော့ ခေါင်းမော့မော့နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတယ်။ သူ့နောက်မှာ ဧရာမ လူထုကြီး၊ ရင်ကော့ ခေါင်းမော့လျှောက်လိုက်နေကြတယ်။ ခွေးတွေ၊ ကလေးတွေ၊ သူဌေးတွေ၊ စာရေးတွေ၊ ဇရာထောင်းတွေ၊ မသာလောင်းတွေလည်းပါလိုက်သေး။
ကာတွန်းအောက်မှာ ပုံစာက ´ ခင်ဗျားနောက်မှာ အားလုံးရှိတယ် ချာချီကြီးရေ´…တဲ့။
ဒီကာတွန်းကို ကျုပ်ငယ်ငယ် သတင်းထောက်ဘ၀ကတည်းက စွဲခဲ့တာ။ ကျုပ်သာကာတွန်းဆွဲတတ်ရင် ဒီိနေ့ ဒေါ်စုနဲ့ လူထု ကာတွန်းပုံဆွဲချင်တယ်။ ဒေါ်စုက ရင်ကော့၊ ခေါင်းမော့ရုံမက ပုသိမ်ထီးပုစွန်ရောင်တ၀ဲဝဲ၊တကားကားနဲ့၊ ထဘီကြီးစွန်တောင်ဆွဲဆွဲပြီး တဟားဟားရယ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။
ပုံစာကိုလည်း ´ဒေါ်စု ခင်ဗျားနောက်မှာ အားလုံးရှိတယ်။ ရှိတယ်။ ကုဋေကုဋာ၊ အသေအချာ မသွေမကွာလိုက်မယ်၊ လိုက်မယ်´လို့ရေးမယ်။
အဲဒီိလိုမျိုးပဲ ရေးရမှာပဗျာ။ မရေးဘဲ ဘယ်နေနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒေါ်စုရဲ့ မဲဆွယ်နိုင်ငံရေးခရီးတွေကိုကြည့်၊ ဒေါ်စုနိုင်နေပြီဗျ။ ဒေါ်စုပါတီ ဒီချုပ်နိုင်နေပြီဗျ။ ဒေါ်စုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနိုင်နေပြီဗျ။
ဘယ်လိုနိုင်တာလဲ။ ခြေထောက်နဲ့ မဲထည့်ပြီးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
ဟုတ်တယ်လေ။ ပြည်သူလူထုကြိးတစ်ရပ်လုံးက ရွာလုံးကျွတ်၊ ရပ်ကွက်လုံးကျွတ်၊ မြို့လုံးကျွတ် ၊ နယ်လုံးကျွတ်၊တိုင်းလုံးကျွတ်၊ ပြည်လုံးကျွတ်၊ ဒေါ်စုရဲ့ မဲဆွယ်နိုင်ငံရေးပွဲတွေဆို ခြေထောက်နဲ့လှမ်းပြီး ချီတက်လာကြတာလေ။
ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလေး ၂၀၁၀ သူငယ်နာနန့်ကြောဆွဲမှာလား။ ကျုပ်စိုးရိမ်တယ်။ အပေါ်မှာ ရေးခဲ့ပြီပဲ။ သို့သော်လည်း အဲပေါ့လေ။
ဧပြီ ၁ရက်နေ့ မဲပုံးနဲ့ မဲပြား မရှောင်သာတဲ့ အမြှောင်ကြား ညားကြပြီဆိုပါတော့။
လက်နဲ့ ထည့်မယ့် မဲတွေကော၊ ဒေါ်စုနဲ့ ပြည်သူနိုင်မှာလား။ ကျုပ်ဗေဒင်ဆရာမဟုတ်လို့ ဒက်ထိတော့ မပြောတတ်ပေါင်ဗျာ။
ခြေနဲ့ထည့်တဲ့မဲတွေ ဒေါ်စုနဲ့ ပြည်သူနိုင်ခဲ့သလို လက်နဲ့ထည့်တဲ့မဲတွေ နိုင်ပါစေကြာင်း ဆုတောင်းပတ္တနာ ပြုရုံမှတစ်ပါး ။(ဗန်းမော်တင်အောင်စကားလုံးယူသုံးရရင်) ကျုပ်က ဘာများကော တတ်နိုင်ဦးမှာတဲ့တုံးဗျာ။
စကားကြွင်းကလေးဆက်ပြောလိုက်ဦးမယ်။ ပြည်သူရဲ့ခြေထောက်မဲတွေဟာ…. ဒေါ်စုကို အယုံအကြည်ရှိကြောင်းပြသလိုက်တဲ့ အဖြူရောင်မဲတွေဖြစ်သလို….. အာဏာ ဥမ္မတ္တကောတွေကို အယုံအကြည်မရှိကြောင်း ပြသလိုက်တဲ့ အနက်ရောင်မဲတွေလည်းဖြစ်ကြောင်း ဟစ်မောင်းခတ်လိုက်ရပါသဗျား။ ။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ။ဒီလှိုင်း စာစောင် . ၁၉မတ်လ ၂၀၁၂
ဒီတစ်ခါ ဘာအကွက်ထွင်ဦးမှာလဲ ? စိတ်ဝင်စားစရာတော.အကောင်းသား …….။
အရင်ကလဲ ကျုပ်တို.မဲတွေ စုန်းစုန်းမြုတ်ခဲ.ပြီးပြီ ၊ ခုရော …………….။
ကြက်ဆူပင်တွေ လာရင် လာဦးမယ်..
အသေအချာ ဖတ်ပြီး အတွေးတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း နဲ့ အားပေးသွားပါတယ်။
မျှဝေတာလေး ကျေးဇူးပါ တစ်ပင်ထဲနွယ်လေးရဲ့ မူပိုင်ရှင်ကြီးရေ။ ;-)
ဒီတစ်ခါ မဲခိုး ရင်တော့ အဲဒီခိုး တဲ့ သူဟာ သူ့သေတွင်းသူတူးတာဘဲ ဆိုတာလောက်တော့ အသိလေး ရှိသင့်တယ်။
အဲဒီလောက်မှ အသိ မရှိရင်လဲ ဒီကစားကွက် ထဲမှာ ထိုးအကျွေး ခံမှာဘဲ။
ယူအက်စ်မှာ.. မဲတကယ်မထည့်ကြခင်.. ကြိုတင်ပြီး.. pollလုပ်တယ.်.။
မီဒီယာတွေ.. စစ်ဒဇင်ဂျာနယ်လစ်တွေ.. ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ထားကြပါ.။မှတ်တမ်းယူကြပါ..။
ကျုပ်တို့ရွာ(မန္တလေးဂေဇက်)ကလည်း လုပ်ထားပါတယ်..။ အပေါ်မှာ Pollမြင်မှာပေါ့..
တကယ်ရလဒ်နဲ့ အကြီးအကျယ်လွဲလို့ကတော့.. အော်ပြီမှတ်..။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း.. ပြန်လှန်လိမ့်မယ်..
ရွေးဂေါက်ပွဲကော်မရှင်က ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အာစီယံလေ့လာသူများကို လက်ခံမယ်တဲ့။ တချိန်ထဲမှာပဲ အယင်က ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ ပြောခဲ့တဲ့ မဲရုံများအတွင်း ဗီဒီယို၊ ကင်မရာ မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ပေးမယ်ဆိုတာ မဟုတ်တော့ပြန်ဘူးတဲ့။ သဂျီးပြောတဲ့ ပြောင်းနေပါပြီဆိုတာ အဲဒါတွေများလား။ ပြောလိုက် ပြောင်းလိုက် ပြောလိုက် ပြောင်းလိုက်နဲ့ သဂျီးသာ ကားထည်လဲစီးသွားတယ်….။ စိတ်မပျက်ကြပါနဲ့ ရွာသားများ.. သဂျီးကား ပရီမီယံကွာလတီ ဓါတ်ဆီထည့်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းအားပေးလိုက်ကြပါ…။